Sida Loo baxsado oo looga baxsado Raadraaca Eyda - 10 Talo oo Aasaasiga ah oo la Oggo
Bogga ugu weynQurxinta EygaTababarka EygaSida Loo baxsado oo looga baxsado Raadraaca Eyda - 10 Talooyin oo Aasaasi ah oo lagu...
Qurxinta EygaTababarka Eyga
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay Janaayo 26, 2022 Eeyaha Vets
Sida Loo baxsado oo looga baxsado Raadraaca Eyda
Waa maxay Ey Dabagal?
Waa maxay sababta Raadinta Eeyga loo isticmaalo?
Talooyin aasaasi ah oo ku saabsan ka baxsashada Eyga Duurjoogta iyada oo aan la joojin ama samayn buuq badan.
Ey ka soo horjeeda Human Trackers
Sidee bay u shaqeeyaan Ey Dabagalayaashu?
U-dhowaanshaha Xayawaanka miyay muhiim u tahay Dabagalka?
Qaladaadka ay Sameeyaan Eeyaha Tracker
Sida Looga Fogaado Eyga Dabagalka Waddada
Sida Looga Baxo Eyga Dabagalka Waddada
Waa maxay Siyaabaha ugu Wanaagsan ee Looga Difaaci karo Dabagalka Eeyaha?
Sida Loo Sameeyo Raad-raac Eeygu Ma Raacdo
Waxaa jira laba nooc oo farsamooyinka baxsadka ah:
Khiyaamooyinka kuma caawin doonaan inaad hesho eeyaha raadraaca
Eeyaha daba-galka ah waa laga cabsan karaa buufinta basbaas.
Waxa ay Mythbusters ka yiraahdeen isku dayga in ay ka baxsadaan raadraaca eeyaha.
Talooyin ka yimid Xirfadlayaasha Daba-galka eey-yaqaannada
Ka warran Eyda Dabagalka Milatari, miyay jiraan?
Eyda roondada ah ee loo tababaray inay raadiyaan dagaalyahannada iska caabinta ama qaxootiga.
Su'aalaha dadku sidoo kale way weydiiyeen.
Intee in le'eg ayaa eyga booliiska eey qofka la socon karaa?
Maxaa sababa in dareenka urta eey xumaato?
Suurtagal ma tahay inaad ka qariso udgoonka eeyga?
Waa maxay saamaynta basbaaska cas ee eyda booliiska?
Sidee bay eeyaha booliisku u gartaan cidda ay raacaanayaan?
Sideey eeydu u falceliyaan marka ay uriyaan basbaaska madow?
Eeyadu si fudud ma u uriyaan basbaaska madow?
Ma runbaa in eyda booliisku ay u tababaran yihiin inay qaniinaan?
Eyda Dabagalka waxa markii ugu horaysay isticmaalay qarnigii 12-aad Knights Templar, laakiin waxa ay ka soo baxeen ugaarsiga xoolaha ilaa ay dadka ilaalinayaan.
Eeyaha daba-galka ah waxa si gaar ah loogu tababbaray inay helaan dadka iyo walxaha. Waxay leeyihiin udgoon gaar ah oo, marka la raacayo, si toos ah ugu qaadi kara qofka ama shayga.
Maxay tahay sababta Dabagalka Ey la isticmaalay?
Isticmaalka eeyaha daba-galka ah waa mid ka mid ah qalabka ugu waxtarka badan ee fulinta sharciga. Waxaa si aad ah loogu tababaray inay ogaadaan wax walba laga bilaabo walxaha qarxa ilaa daroogooyinka iyo qoryaha. Intaa waxa u dheer in ay kala saari karaan udgoonka dadka iyo duunyada oo ay heli karaan dadka, gaar ahaan kuwa maqan ama maqan.
Waxaa jira siyaabo badan oo aad uga baxsan karto eeyaha raadraaca. Dhammaan hababkaas waxaa loo isticmaali karaa si looga baxsado eyga, laakiin dhammaantood maaha kuwo nacas ah.
Waxaa jira siyaabo badan oo looga baxsan karo oo looga baxsan karo eeyaha. Qaar ka mid ah ayaa hoos ku taxan:
- Ku lugaynta wadada dhinaceeda, baaskiilka, ama gaadhiga
- Ku dhuumashada cawska dhaadheer ama duurka
– Inaad ku boodaan meel biyo ah oo aad dabaasha ka fogaato
Eeyaha raadraaca waxa loo tababbaray inay helaan dadka iyo urkooda. Waxa kale oo ay adeegsadaan hay’adaha fulinta sharciga si ay u soo qabtaan dambiilayaasha.
Caawinaadkooda, booliisku waxay heli karaan hanti luntay ama la xado, iyo sidoo kale cadaymo goobta dembiga ka dhacay.
Ma jirto hab nacasnimo ah oo looga baxsan karo eyga raadraaca, laakiin waxaa jira farsamooyin aad isticmaali karto si aad uga fogaato oo ay lumiyaan urkaaga.
Qaar ka mid ah farsamooyinka aad isticmaali karto si aad uga fogaato eeyaha raadraaca waxaa ka mid ah:
– Jihooyin kala duwan oo jidhkaaga u dhaqaaqo
- Socodka dhoobada ama biyaha
- Xidhashada maaskaro ama is-qarxin
Waa wax la wada aaminsan yahay in eeyaha ay kaga fiican yihiin bini'aadamka marka la raadinayo. Laakiin tani run maaha sababtoo ah ma awoodaan inay horay u sii qorsheeyaan oo ay si xeeladaysan u fekeraan.
Dhanka kale, raad-raacayaasha bini'aadamku waxay noqon karaan kuwo istaraatiijiyad dheeraad ah sababtoo ah waa inay tixgeliyaan arrimo ay ka mid yihiin dhulka, cimilada, iyo wakhtiga maalinta. Waa inay sidoo kale xisaabta ku darsadaan falalka eygooda ama waxyaabaha kale ee laga yaabo inay ka jiraan deegaanka.
Eeyadu waa hab wanaagsan oo lagu helo dad. Waxay leeyihiin dareen la yaab leh oo ur ah waxayna la socon karaan ur kasta oo uu kaga tago saaxiibkooda bini'aadamka.
Eyda ayaa qarniyo badan loo isticmaali jiray si ay ula socdaan dambiilayaasha, dadka lumay, iyo xoolaha maqan.
Fikradda ah in eeyaha loo isticmaalo si dadka loola socdo ma aha mid cusub sidoo kale. Waxaa markii ugu horreysay laga bilaabay Boqortooyada Ingiriiska dabayaaqadii 1800-meeyadii markaasoo saraakiisha booliisku ay isku dayayeen inay helaan maxaabiis baxsatay oo ay u suurtagashay inay xabsiga lug kaga baxsadaan.
Eyda ayaa sidoo kale loo isticmaalaa hawlgallada goobidda iyo samatabbixinta sababtoo ah waxay uriyaan dadka ka badbaaday burburka hoostooda ama waxay heli karaan dadka ku xayiran dhismayaasha dumay ama godad.
U dhawaanshaha xayawaanku waa arrin muhiim u ah dabagalka. Mar kasta oo uu xayawaanku u soo dhawaado, waxa badanaya fursadaha uu ku ogaanayo.
Dareemaha u dhowaanshaha waa dareemayaal cabbiraya fogaanta bartilmaameedka. Waxaa loo isticmaali karaa meelo badan oo kala duwan sida militariga, ugaarsiga iyo maareynta duurjoogta.
AKHRI: Siyaabaha La Xaqiijiyay ee Eygaagu u ahaado mid caafimaad qaba
Kiisaska loo isticmaalo dareemahan way kala duwan yihiin iyadoo qaarkood ay yihiin ujeeddooyin amni iyo kuwo kale oo ujeeddooyin cilmi-baaris ah.
Eyda raad-raacayaasha waxa loo tababbaray inay la socdaan dadka iyo xayawaanka. Inta badan waxaa loo adeegsadaa hawlgallada goobidda iyo samatabbixinta. Si kastaba ha ahaatee, waxaa sidoo kale loo isticmaalay in lagu helo carruur luntay, tamashleyaal maqan, iyo xitaa qaab lagu soo qabto dembiilayaasha.
Eeyahani aad bay ugu tababbaran yihiin hawlahooda laakiin nasiib darro, ma jiro eey raad-raac sax ah. Eeyga daba-galka ahi waxa uu samayn karaa khaladaad sida xayawaan kasta ama bani-aadmi kasta.
Dhab ahaantii, eyda qaarkood waxay sameeyaan khaladaad aad u badan oo ay ku dhowdahay inaan suurtogal ahayn in dhammaantood la soo saaro.
Maqaalkani wuxuu taxayaa dhammaan khaladaadka ay Tracker Dogs sameeyeen dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxayna ku soo gabagabeyn doonaan waxa aan sameyn karno si aan uga hortagno arrimahan inay mar kale dhacaan mustaqbalka.
Had iyo jeer waa fikrad wanaagsan inaad si degdeg ah uga gudubto waddada markaad aragto eey raadraaca. Waa inaad sidoo kale isku daydaa inaad isticmaashid indhoolayaal ama jidadka si degdeg ah u gudub.
Waa muhiim inaad indhahaaga dhulka ku hayso oo aad ka war hayso agagaarkaaga.
Had iyo jeer waa fikrad wanaagsan inaad si degdeg ah u goyso wadada markaad aragto eey raadraaca, laakiin way sii adkaan kartaa haddii aad ku sugan tahay meel ay ku nool yihiin dad badan iyo dhismayaal. Isku day inaadan eegin maamulaha eeyga, laakiin taa beddelkeeda diiradda saar agagaarkaaga oo sii wad hoos u eeg dhulka.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo looga baxsan karo eyga raadraaca. Waxaad isticmaali kartaa geedo, duurka, gasacadaha qashinka, iyo walxaha kale si aad u noqoto mid aan la arki karin. Haddii aad baabuur ku jirto, waad dheerayn kartaa ama waad beddeli kartaa baabuurka. Haddii aad haysato baaskiil, markaa waxaad si degdeg ah uga badelan kartaa raadraacayaashaada.
Haddii raadraacahaagu kuu dhow yahay oo aysan jirin waddo aad uga baxsan karto isaga/iyada markaas waa inaad sameyso buuq badan intii suurtagal ah. Tani waxay ku adkeyn doontaa raadraacaha inuu la socdo goobtaada oo uu mar kale ku helo.
Waxaa jira siyaabo badan oo looga hortagi karo eeyaha, laakiin qaar ka mid ah siyaabaha ugu fiican ee sidaas loo sameeyo waxaa ka mid ah:
Ku haynta eygaaga xadhig markaad baxdo
Isticmaalka gambaleelka gambaleelka eeygaaga marka aad guriga timaadid
U dayn cuntada iyo biyaha eeygaaga
Ka taxadarida qashin kasta oo ku soo hara dibadda
Hubinta in aysan jirin cunto ama biyo uu eeygu ka heli karo deyrkaaga ama gurigaaga
Si aad uga baxsato eeyga raadraaca, waa inaad isticmaashaa farsamooyinka dhuumashada. Waxaa jira farsamooyin baxsad ah oo kala duwan oo la isticmaali karo iyadoo ku xiran xaaladda.
- Baxsasho jireed:
Waxaa jira laba nooc oo farsamooyinka dhuumashada ah. Midka kowaad waxa ku jira farsamooyinka dhuumashada jirka sida dhuumashada iyo orodka. Midda labaad waxa ku jira farsamooyinka hab-dhaqanka sida been-abuurka iyo diiwaannada been-abuurka ah.
- Baxsasho nafsiyeed:
Cilmi-nafsiga, ka-baxsanaantu waa ficilka qarinta ama qarinta macluumaadka ama dareenka.
Si looga fogaado in ay ogaadaan koox ey ah oo tababaran adiga oo dib u labalaabaya, abuurista saddex xagal udgoon (hab aaminsanaanta qaar ayaa shaqayn karta), ama ku buufinta dhulka iyo cagahaaga buufinta basbaas, waxa ugu fiican ee aad sameyn kartid marka hore waa inaad fogaato. ka soo qaado kooxda eyda sida ugu macquulsan ee aad awooddo sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, adigoo ku safraya dhul adag.
Kadibna dhaqaaq, adigoo rajaynaya inaad daaliso eeyaha iyo maamulayaasha si ay u joojiyaan raadinta sida ugu dhakhsaha badan.
Nidaamka ugu horreeya ee ganacsigu waa in aad ka fogaato eryadaada intii aad awooddo. Waxaad u kaydin kartaa farsamooyinka hadhow haddii eryantu ay wali socoto oo aadan lumin aragtida eryadaada.
Shaki kuma jiro in isgaarsiinta raadiyaha, gaar ahaan la socodka hawada, ay tahay in la tixgeliyo. Markaa:
Ha shidin wax dab-damis ah maadaama ay sii daayaan saxeex kuleyl kaas oo la ogaan karo oo uu la socon karo kulaylka diyaarad duuleysa.
Laguma talinayo in aad u cararto dhanka wadada isku xirta meesha aad ka baxsaneyso.
Haddii aad u baahan tahay inaad guurto, ha tagin meel labaad ama magaalo ay dadku ku badan yihiin ilaa ay tahay meel nabdoon oo sidaas lagu sameeyo. ( Maskaxda ku hay in isgaarsiinta raadiyaha ee roondada ama barxada u dhow magaaladaas ay muujin karto in roondo ay bilaabi doonaan inay kaa raadiyaan jihadaas, sidaas darteed xitaa haddii adiga ama kuwa kale aaminsan yihiin inay badbaado tahay inaad ka tagto, waxaa laga yaabaa inaysan ammaan ahayn. in sidaas la sameeyo.
AKHRI: Kulleejyada shoogga miyay eeyaha dhaawacaan? 9-ka ugu sarreeya ee ugu shoogga eeyga 2022
Qaar ka mid ah ilaha internetka ayaa sheeganaya in buufinta basbaaska ama basbaaska (midkood madow ama basbaaska basbaaska cas) ay ka caawin karaan ka fogaanshaha dareenka eeyga.
Tani ma runbaa? Dusha sare, fikradda ayaa ah in aad ku buufiso ama ku kala firdhiso basbaaska raadadkaaga taasina waxay keenaysaa in eyga uu waayo meesha uu joogo.
Waxa marar badan la sheegay in ay noqotay wax ka mid ah halyeyga magaalada ee wareegyada qaarkood. Waa muhiim inaad fahanto in tani aysan run ahayn.
Xitaa haddii ay la kulmaan basbaaska ka dib markay soo qaadaan urkaaga, eeyaha casriga ah ee raadraaca waxay leeyihiin sanka xasaasiga ah waxayna si fudud u soo qaadan doonaan urtaaga mar kale wax yar ka dib. Ma awoodaan inay ka takhalusaan udgoonka.
Markaan taas idhi, istaraatiijiyadani waxay ku iibsan kartaa oo keliya dhowr daqiiqo oo waqti ah ugu badnaan. Basbaaska ayaa laga yaabaa inuu u keeno eeyga raadraaca inuu mashquulo ama qaso, taasoo kuu ogolaanaysa inaad hesho 2-5 daqiiqo oo dheeraad ah si aad uga fogaato.
Natiijo ahaan, haddii raacdayaashaadu ay kugu soo dhawaadaan, waxaa laga yaabaa inay macno samaynayso inaad isticmaasho istaraatiijiyadan.
Ugu dambeyntii, maskaxda ku hay in buufinta basbaaska ay si joogto ah wax ku ool u tahay la tacaalidda kuwa bini'aadamka ah ee weeraraya sidoo kale, marka laga yaabo inaysan ka shaqeynin inay jahawareeraan eyga, waxay noqon kartaa beddelka ugu dambeeya ee aad iskaga difaaci karto kuwa gacanta ku haya eeyga.
Markaa fikrad xun maaha inaad gacanta ku hayso daasadda buufinta basbaaska haddii ay wax dhacaan.
Waxaan kugula talineynaa buufinta basbaaska sababtoo ah waa nooca ugu awoodda badan ee buufinta basbaaska ee sida caadiga ah la heli karo, iyo haddii ay awood u yeelan karto orso, waxay hubaal ahaan u dhimi doontaa eeyga (ama kuwa gacanta ku haya) sidoo kale.
Xeelad caadi ah oo lagu lumiyo eey u tababaran (waxay adeegsadeen dhiig-bax iyo maamuleheedii) waxaa caddeeyey ku dhawaad ​​aan macquul ahayn Mythbusters qaybta 148 ee Timaha Eyga, in kasta oo ay ku soo gabagabeeyeen in ay macquul tahay in la isticmaalo aag dadku ku badan yihiin oo udgoon badan. iyo carqaladaha si ay u caawiyaan jahawareerinta eeyga raadraaca iyo samaynta baxsasho guul leh ee dhacdada.
Natiijo ahaan, u baxsashada meel dadku ku badan yihiin waxay noqon kartaa ikhtiyaar macquul ah oo looga baxsan karo eeyga raadraaca.
Habkani waxa uu awood u leeyahay in uu dareemo eeyga - waxa ay la mid tahay in si toos ah indhaha qofka loo geliyo iftiin aad u ifaya, taas oo keenta in ay wax garan waayaan. Dhanka kale, ka bixista gobollada la deggan yahay, waxay la timaaddaa khatarteeda iyo khatarteeda.
Meesha dadku ku badan yihiin qasab maaha inay tilmaamayso magaalo yar; halkii, waxaad rabtaa aag cufnaan sare leh, taasoo la macno ah inaad raadinayso aag magaalo leh inta lug ee suurtogalka ah (tani waxay u baahan kartaa xoogaa aqoon ah badbaadada magaalada).
Haddii aadan u cararin gobol ay dadku ku badan yihiin, koox dabagal ah ayay u badan tahay inay ku raacaan, sida uu qabo Mythbusters.
Mar labaad, waxay hoos ugu dhacdaa raadraaca joogtada ah ee unugyada maqaarka ee aynu kaga tagno meel kasta oo aan u socdaalno.
Markii la weydiiyay haddii ay macquul tahay in eyga daba-galka ah iyo maamuleheedu ay kala tagaan, Ed Frawley, oo ah khabiir si fiican u yaqaana ilaalinta sharciga iyo milkiilaha mid ka mid ah xarumaha taranka ee Shepherd Jarmalka ugu caansan ee Waqooyiga Ameerika, iyo sidoo kale tracker khibrad leh, ayaa sheegay in ay tahay.
Markay timaaddo eyga roondada aasaasiga ah, waxa soo baxaysa in eeyahani aanay sida caadiga ah lahayn heerar sare oo guul ah marka ay timaado raadinta iyo qabashada dembiilaha baxsadka ah. Dhab ahaantii, marka "eeyaha deegaanka" waa loo yeedhay, waxay leeyihiin u janjeera inay raadkooda lumiyaan si degdeg ah oo ay si degdeg ah u daalaan.
Tani, dabcan, waxay u shaqeysaa faa'iidadaada, ilaa iyo inta aad sii wado inaad u socoto jihada saxda ah. Sababta ka danbeysa arrintan waa sida soo socota.
"Marka eyda maxalliga ahi ay waayaan jidkooda ama ay daalaan, maamule sare oo leh canine sare oo tababar sare leh ayaa loo yeeri karaa, laakiin isaga ama iyada waxaa laga yaabaa inay u safraan 100 ilaa 200 mayl fog si ay u caawiyaan.
Si aad u gaadho halka uu ka bilaabmayo dariiqa baxsashadu, waa in khabiirkani uu ka socdaalaa meel ka baxsan magaalada, taas oo la macno ah in inta aad haysatid saacado badan oo ledh ah, haddana waxa aad halis ugu jirtaa in lagu qabto.
Eeyaha raadraaca milatariga ayaa si isa soo taraysa loo tababaray oo loo shaqaaleysiiyay si ay u aqoonsadaan miinada, dabinada booby, iyo kuwa wax toogta ee meel u dhow. Natiijo ahaan, waxaa yaraada kooxaha canabka ah ee sida saxda ah loogu tababaray inay raadiyaan tuhmanaha baxsanaya iyagoo dhex maraya meel cidlo ah.
Dhinaca kale ee lacagta qadaadiicda ah, haddii aad ku filan tahay oo aad haysato qori, oo aad ku hareeraysay koox baayac-mushtar milatari ah oo ku soo wajahan, waxay u badan tahay inay ku arkaan sababtoo ah eeyahani waxay u tababaran yihiin inay helaan kuwa wax dhuunta.
AKHRI: Sida Eey Cusub Loo Dejiyo Guri Qoys
Tani waxay u badan tahay inaysan fikrad wanaagsan ahayn. (Hadii aanad kaligaa ahayn oo ay jiraan wax ka badan oo idinka mid ah mooyaane,ama aad haysatid meel ku dheggan oo aad ku sugto taas oo aad horeba u qorshaysay.)
Sentry Dogs waa ikhtiyaar lixaad.
Kuwaani waa eeyo aad u tababaran oo loo isticmaalo ilaalinta xayndaabyada xarumaha iyo xeryaha ciidamada.
Marka la ogaado cid soo duushay ama soo dhex gashay, waxaa goobta u dhow loo diraa ciidamo hubeysan si ay xaaladda wax uga qabtaan.
Waa hal shay in loo yeedho koox dabagal ah oo la daba galo qof laga shakiyay inuu cararay; Waa arrin kale in la keeno kooxo daba-gal ah iyadoo ujeedadu tahay in la helo lagana saaro kuwa baxsadka ah iyo laga yaabee dagaalyahannada iska caabinta ee aag gaar ah.
Dhinaca khariidadda, shaqaalaha tababaran ayaa awood u leh inay ku wareegaan meel ay ka shakiyaan inay dadku ku dhuumanayaan, ka dibna waxay ka soo geli karaan jihooyin badan si ay u soo ururiyaan qof kasta oo lagu qabto gudaha goobta baaritaanka.
Qaxootigii dagaalka, tusaale ahaan, ama shakhsiyaadka ka cararaya sharciga dagaalka ayaa tusaale u ah xaaladahan oo kale.
Wakhtiga dheer ee lagu qaato hal meel, gaar ahaan inta u dhaxaysa saldhig ciidan ama meel ka baxsan, waxay kordhinaysaa suurtogalnimada in goobtaada la ogaado inta lagu jiro roondo ama goobid.
Intee in le'eg ayuu eeygu raaci karaa aadanaha? Eeyga tababbaran wuxuu ogaan karaa udgoonka inta u dhaxaysa konton iyo shan boqol oo yard, iyadoo ku xidhan cimilada.
Si kastaba ha ahaatee, haddii cimiladu si gaar ah u liidato, boqol yard ayaa laga yaabaa inay xad dhaaf tahay. Eyga taagan dabayl kor u kac ah maalinta dabaysha waxa hubaal ah in uu qof uriyo afartan yaardi.
Mid ka mid ah udgoon si buuxda u dabooli kara dareenka urta eeyga ayaa ah warankiilo, taas oo u horseedi karta inay lumiyaan awooddooda urta gebi ahaanba.
Natiijo ahaan, ma awoodaan inay ka baaraandegaan udgoonka kale ee deegaankooda. Inkastoo xaqiiqda ah in ay lumiyeen dareenkooda urta, taas oo ahayd dareenkooda asaasiga ah, waxay sii wadaan inay ku tiirsanaadaan badbaadada.
Ilbiriqsi kasta, malaayiin daqiiqo oo unugyada maqaarka ah ayaa waxaa daadiya xayawaanka, eygu waxay ogaan karaan unugyadaas oo ay isticmaalaan macluumaadka ay soo ururiyaan si ay u sameeyaan sawir maskaxeed oo ku hareeraysan hareeraha iyaga oo ku salaysan ur.
Ma qarin kartid gabi ahaanba udgoonkaaga bini'aadamka ilaa lagugu xiro xumbo aan lahayn dalool ama dalool. Tani waa wax aan macquul aheyn ilaa aad ku jirto xumbo gebi ahaanba xiran.
Sida laga soo xigtay dhakhtarka xoolaha ee la tashaday baaritaanka, nuugista basbaaska cayenne waxay keeni kartaa xaalado caafimaad oo degdeg ah oo ku yimaada xayawaanka, oo ka bilaabma xanaaqa iyo gubashada xuubabka sanka iyo dhuunta marinnada dhuunta ilaa cidhiidhiga neefsiga, taas oo keeni karta "embolism, neefsashada oo xirta, ama dhimasho.”
Waxaa lagu baray inay raacaan udgoonka ugu awoodda badan. Ilaa iyo inta ay la socdaan ur isku mid ah, waxay ugu dambeyntii heli doonaan isha. Eeygu wuxuu raaci doonaa raad ur udgoon ilaa iyo inta uusan qof kale ka soo gudbin tan iyo markii dembiilaha ka tagay.
Marka loo isticmaalo tiro badan, basbaaska madow waa basbaas - dhadhan ay eeyaha badankoodu neceb yihiin. Haddii eeygaagu uu neefsado basbaaska madow (tusaale, haddii uu ku daaho dhulka), waxa laga yaabaa inay ku keento dareen aad u xun oo sankiisa ah, taasoo keenta inuu hindhiso si joogto ah.
Nasiib wanaag, eeyaha intooda badani waxay si dabiici ah uga soo horjeedaan khatarta caafimaad ee iman karta ee la xidhiidha basbaaska madow sababtoo ah udgoonkiisa. Aad bay uga cadhaysiiyaan dareenka urta eeyga, eyda inteeda badana way iska ilaalinayaan inay cunaan ama inay u dhawaadaan. Runtii, basbaaska madow ayaa loo adeegsaday si eeyaha looga ilaaliyo inay qayilaan.
Marka la soo dhigo, waxaa la baraa inay fuushaan si ay u muujiyaan inay arkeen dembiilaha. Waxaa jira duruufo uu eey ku dhufto askariga, sida marka uu askarigu eryanayo qof laga shakisan yahay oo aanu joogsan, sababtoo ah eeygu ma kala saari karo eedaysanaha iyo sarkaalka booliiska ah.
Waxaan rajeyneynaa inaad ka heshay maqaalkan…Sida Loo baxsado oo looga baxsado Raadraaca Eyda
Fadlan xor u noqo inaad nala wadaagto qaybta faallooyinka ee hoose.
Views Views: 2,778
iska ilaali eeyaha raadraaca
dariiqyada si degdeg ah uga gudub
difaacyada eeyaha raadraaca
baxso eeyaha raadraaca
sida uu u shaqeeyo raadraaca eyga
sida ugu dhow ee aad u heli karto eyga ka hor inta uusan ku ogaan
sida looga baxsado raadraaca eeyaha
ka badin raadiyahaaga
qalabka u dhow
isticmaal baro indho la'
aaway qalabka raadraaca
article PreviousEey-daawaynta waxay hagaajin karaan caafimaadka maskaxda iyo jidhka
Next articleIntee in le'eg Shukulaatada ayaa dili doonta eyga - Tusaha Dhameystiran (7 Talooyin oo lagu ogaanayo)
Sidee loo tababaraa Eyda Adeegga? 5 tabo oo aad ku ogaan karto (Shuruudaha + Qiimaha)
TABABBARKA WELSH PEMBROKE KORGI bilooyin
10 Khaladaadka Tababarka Eeyaha Caadiga ah
Sidee loo daalin karaa puppy beagle?
Sida Loo Noqdo Tababare Ey Xirfad leh?
Ma doonaysaa inaad u diwaangeliso Eeygaaga ESA ahaan? Waa kan waxa aad u baahan tahay inaad ogaato
Tusaha Bulldog Faransiiska ee Tababarka - 7 shay oo la ogaado
Kulleejyada shoogga miyay eeyaha dhaawacaan? 9-ka ugu sarreeya ee ugu shoogga eeyga 2022
Talooyin ah in Had iyo jeer niyada lagu hayo Marka Tababarka Eyda 2022
Tilmaanta Dhamaystiran ee Tababarka Eyda oo leh 6-daan Talo
5 Talooyin kaa caawinaya Eeydu inay joojiyaan ilbaxnimada dhulka - Waa la xaliyay!
15 Talooyin iyo Buugaagta Tababarka Eeyaha ugu Sareeya sanadka 2022